Maqaalka Dave Hodgson Martech Zone |
Maqaallada by Dave Hodgson
Dave Hodgson waa agaasimaha iibka iyo qaybinta Waqooyiga Ameerika Qalabka Zeiss Multimedia, koox ka tirsan qaybta alaabada macaamiisha ee Zeiss, sameeya muraayadaha kamaradaha, muraayadaha indhaha iyo baaxadda. Qalabka Multimedia waxaa ka mid ah qalabka loo yaqaan 'Zeiss VR One headset' iyo aalado mustaqbalka la xiran karo oo leh muraayadaha indhaha.
Kacsanaanta VR ee Daabacaada iyo Suuqgeynta
Arbacada, Janaayo 3, 2018 Dave Hodgson
Tan iyo bilowgii suuqgeynta casriga ah, magacyadu waxay fahmeen in sameynta xiriir lala yeesho isticmaaleyaasha ugu dambeeya ay xudun u tahay istiraatiijiyad suuqgeyn guul leh - abuurista wax kicin kara shucuurta ama bixiya khibrad inta badan leh dareenka ugu dambeeya. Iyada oo suuqleyda ay sii kordhayaan xeeladaha dhijitaalka ah iyo kuwa moobaylka ah, awooddii ay ugu xirmi lahaayeen adeegsadayaasha dhammaadka qaab qoto-dheer ayaa hoos u dhacday. Si kastaba ha noqotee, ballanqaadka xaqiiqda dalwaddii (VR) oo ah waayo-aragnimo dhex dhexaad ah ayaa daaran